Factory sy mpamatsy lamba vita amin'ny lamba silibola mora vidy | Chengyang
Ny landy vita amin'ny silipo dia vita amin'ny lamba basalin'ny lamba fiberglass mahazaka hafanana ambony sy silika vita amin'ny silipo amin'ny alàlan'ny fanodinana manaraka; Izy io dia fitaovana mitambatra miaraka amin'ny kalitao avo lenta. Nampiasaina be dia be tamin'ny zana-habakabaka, indostrian'ny simika, solika, fitaovana elektrika lehibe mamokatra, milina, metallurgy, insulation elektrika, fananganana ary sehatra hafa.
Vidin'ny FOB: USD 3.2-4.2 / sqm
Fahaizana manome: 100.000 metatra toradroa / volana
Fepetra fandoavana: L / C amin'ny fahitana, T / T
1. Fampidirana ny vokatra
Lamba Fiberglass Silicone dia vita amin'ny akora basal an'ny lamba fiberglass mahazaka hafanana ambony sy ny silika vita amin'ny silipo amin'ny alàlan'ny fanodinana manaraka; Izy io dia fitaovana mitambatra miaraka amin'ny kalitao avo lenta. Nampiasaina be dia be tamin'ny zana-habakabaka, indostrian'ny simika, solika, fitaovana elektrika lehibe mamokatra, milina, metallurgy, insulation elektrika, fananganana ary sehatra hafa.
2. Parameter teknika
0,5 ± 0.01mm
0,8 ± 0.01mm
lanja / m²
1) Fahombiazana tsara amin'ny hafanana avo lenta sy maripana ambany, -70 ° C-280 ° C;
2) mahazaka harafesina simika, tsy may afo, tsy mahazaka solika, tsy tantera-drano;
3) Hery lehibe;
4) fanoherana ny ozona, oksida, hazavana ary toetr'andro;
5) Ambony tsy miraikitra ambony, azo sasana mora foana;
6) fitoniana refy;
1) Azo ampiasaina ho fitaovana insulation elektrika.
2) Mpanontrona tsy metaly, azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona ary azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny solika, injeniera simika, simenitra ary angovo.
3) Azo ampiasaina ho fitaovana fanoherana ny harafesina, fitaovana fonosana sns.
5. fonosana sy fandefasana
Antsipirian'ny fonosana: Kitapo sarimihetsika plastika + Carton
Previous: Lamba Fiberglass mainty
1. F: Ahoana ny momba ny sarany santionany?
A: santionany farany: tsy andoavam-bola, fa ho entina ny entana: santionany namboarina: mila fiampangana santionany, fa hamerina izahay raha nametraka baiko ofisialy avy eo.
2. F: Ahoana ny amin'ny santionany?
A: Ho an'ireo santionany efa misy dia maharitra 1-2 andro. Ho an'ny santionany namboarina dia maharitra 3-5 andro.
3. F: Mandra-pahoviana ny fotoana famokarana?
A: maharitra 3-10 andro ny MOQ.
4. F: Ohatrinona ny vidin'ny entana?
A: Miorina amin'ny filaminana qty ary koa fomba fandefasana! Miankina aminao ny fomba fandefasana, ary afaka manampy amin'ny fampisehoana ny vidiny avy aminay izahay ho an'ny referansaAry afaka misafidy ny fomba mora indrindra fandefasana ianao!
Lamba Fiberglass mifono silipo
Lamba Fiberglass vita amin'ny silipo
Lamba matevina Fiberglass 3mm
Tape Fiberglass Ptfe
Taratasy vita amin'ny lasopy vita amin'ny aluminium
Lamba Fiberglass Aluminized
Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Clot Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika,